Umtya woMdlalo sisixhobo esitsha sikaNomad seApple Watch | Ndisuka mac
Umtya weSport ngumtya omtsha kaNomad weApple Watch
UNomad uyaqhubeka nokwazisa iimveliso ezintsha ezinomdla zezixhobo zeApple kwaye yile ukongeza kwifayile ye- Iimeko ze-iPhone 12 sabona kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, inkampani yaseCalifornia isungula Umtya omtsha weMidlalo kubasebenzisi beWatch Apple.
Ngokubhekisele kwizixhobo kunye noyilo uNomad unokuba yinkampani ye-Apple ngokulula kwaye bazabalazela ukuba nomgangatho ogqwesileyo wezinto zabo kunye nokwazisa uyilo oluhle kunye nokusebenza. Umtya omtsha weMidlalo unika umsebenzisi intuthuzelo kunye nokukhuseleka xa kuziwa ekubeni neApple Watch incanyathiselwe kakuhle, ukongeza kule meko kunjalo umtya wezemidlalo ke akukho mabhandeji acaphukisayo okanye amakhonkco ukuze isetyenziswe kwimidlalo.
Ukubamba umtya ngokulula kufuneka sidlulise ibhendi ngaphakathi kwelinye icandelo lomtya kwaye siqinise. Ilula ukuyisebenzisa kwaye iya kumelana nazo zonke iintshukumo ezenziwa ngumsebenzisi kwimisebenzi yabo yomzimba nokuba kunzima kanjani. Ukongeza, ukuvalwa kunika ukhuseleko olupheleleyo ngokuchasene nokubetha okunokwenzeka, asiyi kuvula ngokulula kwiintshukumo ezingazibandakanyiyo okanye kwimithambo.
Izinto zokuvelisa zalo Mtya woMdlalo ziyafana naleyo isetyenzisiweyo Umtya omnyama, I-fluroelastomer esetyenziswa yi-Apple eyayo. Ngamafutshane, sijamelene nomtya omangalisayo kuyilo, ulungele uqeqesho kwaye unexabiso elifanayo neRugged, Iidola ze-49,95. Ungayibona ngokweenkcukacha Indawo esemthethweni kaNomad kwaye inokuthengwa kwivenkile enye okanye kwiivenkile zamaqabane. Lo Mtya weMidlalo mtsha unokuba sisipho esihle kula maqela eKrisimesi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Umtya weSport ngumtya omtsha kaNomad weApple Watch
Ngoku siyayibona i-trailer entsha ye-Apple TV + i-Stillwater yabantwana
Ukuncipha kwe-Mac mini entsha kusibonisa ibhodi yomama ene-M1